स्वस्थ रहन पेय पदार्थ
नितु घले बुधवार, बैशाख ६, २०७४ 9367 पटक पढिएको
आँपपन्ना एक लोकप्रिय पेय पदार्थ हो । काँचो आँपबाट बनाइएको यो पेय पदार्थमा ‘भिटामिन सी‍' र ‘एन्टिअक्सिडेन्ट‍' मिसिएको हुन्छ जसका कारण गर्मीमा हुन सक्ने विभिन्न समस्याबाट बच्न सकिन्छ । यसका साथै यसले शरीरलाई शीतल बनाउन सहयोग गर्छ । यसले शरीरलाई हिट स्ट्रोकबाट बचाउन र शरीरमा पानीको कमी हुनबाट जोगाएर राख्छ । यो स्वास्थ्यवद्र्धक र स्वादिलो पनि हुन्छ । यसमा मनपर्ने खालका मसलाहरू हालेर पिउन सकिन्छ ।
यो पेय पदार्थले गर्मीको समयमा खाना पचाउनको लागि सहयोग गर्छ । विशेषगरी यो खानापछि पिउने गरिन्छ । दही, पानी, मरिच, नुन, अदुवा र जिरा मिसाएर बनाइएको यो पेय पदार्थले गर्मीमा शरीरलाई पानीको कमी हुनबाट जोगाउनुको साथै पाचनप्रक्रियालाई पनि सघाउँछ । मसलेदार खाना खाएपछि यो पिउनु निकै लाभदायक मानिन्छ ।
कागतीपानी वा लेमोनेड
कागतीपानी सायद गर्मीका लागि उत्तम, सबैभन्दा सस्तो र फलदायी पेय हो । सस्तोमात्रै होइन यो गर्मीमा एकदमै प्रभावकारी पनि हुन्छ । ‘भिटामिन सी‍' बाहेक यसमा ‘भिटामिन बी‍' पनि पाइन्छ । यसमा मिनरल, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र फस्फोरस पनि पाइने हुनाले यसको सेवनले शरीरलाई फाइदा पुर्‍याउँछ । ताजा पानीमा कागती र रुचिअनुसार चिनी वा नुन हालेर पिउन सकिन्छ ।
गर्मीको लागि खर्बुजाको जुस एउटा उत्तम पेय हो । खर्बुजा खाँदा आउने यसको बिउहरूले गर्दा वाक्क भएमा यसलाई जुस बनाएर पिउन सकिन्छ । यसले स्वास्थ्यमा धेरै प्रकारको फाइदा गर्छ । यसले तौल घटाउनको लागि पनि धेरै सहयोग पुर्‍याउँछ । यसमा ९० प्रतिशत पानीको मात्रा हुन्छ । सय ग्राम खर्बुजामा ३० क्यालोरी पाइन्छ । यसले किड्नीलाई स्वास्थ्य राख्न र गर्मीमा हुने मांसपेशी दुखाइ, आँखाको दुखाइबाट पनि बच्न सहयोग गर्छ । यसमा तुलसीको पात मिलाएर पिएमा अझै बढी फाइदा गर्छ ।
जलजिरा अर्को प्रसिद्ध पेय हो । यसले भोक जगाउने काम गर्छ । यसलाई गुलियो र स्पाइसी स्वाद बनाएर पिउन सकिन्छ । यसमा जिरा, मरिच, तुलसी, इम्ली र पानी राखेर पिउन सकिन्छ ।
गर्मीमा उखुको जुस पिउनाले हृदयघातबाट बच्न सकिन्छ । यसले शरीरमा हुन सक्ने इन्फेक्सनबाट बचाउँछ । यसबाहेक उखुको जुसमा पोटासियम, ग्लुकोज, एन्टिअक्सिडेन्ट, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम पाइन्छ । यसले पनि शरीरमा पानीको मात्रालाई जोगाउन मद्दत गर्छ ।
नरिवलको जुस पनि अर्को फाइदाजनक पेय पदार्थ हो । यसले शरीरलाई पुनर्ताजगी गराउँछ । थोरै मात्रै नरिवल पानी पिउँदा पनि पोषण पाइन्छ । यसमा कोलस्ट्रोलको मात्रा शून्य प्रतिशत हुन्छ भने ‘भिटामिन बी‍' पनि पाइन्छ । नरिवल पानीले झाडापखाला हुनबाट जोगाउँछ । छालामा चमक ल्याउनुका साथै मिर्गौलाको पत्थरीको जोखिमबाट पनि बचाउँछ ।
माथिका सबै पेयहरू लाभदायक छन् । तर पनि सबैभन्दा महत्ववपूर्ण र नभै नहुने भनेको पानी हो । पानीको गुणलाई भुल्नु हुँदैन । गर्मीमा घामको ताप र पसिनाको कारण शरीर सुक्ने हुनाले पानी धेरै आवश्यक छ । पानीले शरीर, छाला र दिमागलाई पनि स्वास्थ्य बनाउछ । यसले शरीरमा भएका विकारबाट बचाउनुको साथै शरीरको तापक्रमलाई सन्तुलनमा राख्छ ।
प्रधानमन्त्री आज भारत जाँदै 738
नेपाल-भारत वार्ता : पञ्चेश्वर असफल 4040
सांसद नै ठगिन्छन् ट्याक्सी चालकबाट अरूको हालत के होला? 45090
फौजदारी संहितामा फड्को 668
नेपाल-भारत सम्बन्धका अहम् सवाल 419
टुलु-टुलु, निष्ठुरीको स्वतन्त्र प्रेस ! 1313
बाढी पीडितको सहयोगका लागि प्रचण्डले दिए देउवालाई चेक 821
सर्पको टोकइबाट एकको मृत्यु 216
अध्यागमनको फन्दामा नक्कली खेलाडी 2458
'गोडा गुम्यो, गैंडा नगुमोस्' 1481
फेसबुकका सिइओ मार्क जुगरवर्क फेरी बुवा बन्‍दै 8019